Thermal mado: kedu ihe ọ bụ, ụdị, ka esi eji ya ... | Ngwaike efu
Thermal mado: kedu ihe ọ bụ, ụdị, otu esi eji ya ...
Isaac | 15/11/2021 11:38 | Ihe eletrọniki
La ọkụ tapawa bụ ihe a na-ejikarị eme ihe ụwa nke electronics. N'ozuzu, dị ka interface iji melite mgbasa ọkụ n'etiti ibe nhazi dị elu na heatsinks. Ma ọ bụghị naanị ebe ọ na-eji, ọ nwekwara ike ga-eji maka elu ike transistor, ka peltier mmetụta efere, Wdg
N'isiokwu a, ị ga-ama Kedu ihe bụ ihe a, ọrụ ya, otu esi etinye ya nke ọma, ụdị ndị dị na ahịa na ụdị kachasị mma ị nwere ike ịzụta.
1 Gịnị bụ thermal mado?
3 Therdị nke griiz na-ekpo ọkụ
4 Kedu ngwaahịa ị ga-azụta?
Gịnị bụ thermal mado?
Enwere ike ịkpọ ya n'ụzọ dị iche iche: thermal mado, thermal silicone, thermal griiz, wdg. Okwu ndị a niile bụ otu, ọ nweghịkwa ọdịiche dị n'etiti ha. Na-ezo aka na ihe nwere ezigbo ihe nrụpụta thermal conductivity iji nyere aka ịgbasa ọkụ ka mma mgbe enwere oghere n'etiti elu abụọ. Dịka ọmụmaatụ, mgbe a na-eji heatsink eme ihe na mgbawa, iji mejupụta "ọpụpụ" nke nwere ike ịdị n'etiti otu elu na nke ọzọ ma si otú ahụ mee ka nduzi dịkwuo mma.
Thermal mado nwere ihe dị iche iche na ya ihe mejupụtara:
Polymerizable mmiri mmiri matrix: ọ bụ isi nke mado, nke na-eme ka ọ bụrụ ihe na-emepụta mmiri. N'ozuzu, ụdị gels ma ọ bụ pastes ndị a na-adaberekarị na silicones (ya mere aha ha), epoxy resins, acrylates, urethane, wdg, na ọbụna nwere ike ịhazi ha na nrapado ma ọ bụ pads kama ịbụ n'ụdị mpempe akwụkwọ.
Ahụ: ndị a na-ejuputa na-anọchi anya n'etiti 70 na 80% nke mejupụtara nke thermal mado. N'okwu a, ha nwere ike ịdị iche iche, dị ka ọla kọpa, aluminum, silver, zinc oxide, boron nitride, wdg.
N'ihi ihe niile a mejupụtara, nke a thermal mado nwere ike ịbụ na-egbu egbu ma ọ bụrụ na-eloda ya. Ya mere, a ga-akpachapụ anya mgbe ị na-eji ya, saa aka ma ọ bụrụ na ejiri ya na-enweghị uwe aka ma zere ịhapụ ya n'ebe ụmụaka ga-eru. Tụkwasị na nke ahụ, ọ na-akpasukwa akpụkpọ ahụ, anya, na akpụkpọ anụ mucous, n'ihi ya, ị kwesịrị iji ihe nchebe mgbe ị na-eji ya. Ụfọdụ nkuzi vidiyo na-egosi otú ha si etinye ya ọbụna n'aka, ma nke a ekwesịghị ime.
Ọ bụrụ na ị nọ n'ihu akụrụngwa eletrọnịkị ọhụrụ, ma ị maghị ma ị nwere ike iji tapawa thermal n'elu ya ma ọ bụ nke ị ga-eji, ana m akwado ka ị gụọ ya mgbe niile. emepụta datasheets. N'ime akwụkwọ a, ị ga-ahụ ozi gbasara ya, na mgbakwunye na mkpa mgbasa, ike, oke na okpomọkụ kacha nta na-akwado, ụkpụrụ dị ka nkwụsị-ikpe, nkwụsị-ikuku, wdg.
Thermal mado ọ bụghị naanị nwere Njirimara nke thermal conductivity, kamakwa ndị ọzọ, na ọ dị mkpa ịṅa ntị pụrụ iche na ha, ebe ọ bụ na ha nwere ike ọnọdụ ojiji dị ka nke electronic ọcha. Ihe e ji mara ihe a bụ:
Nrụpụta ọkụ: Ọ bụ ihe kachasị mkpa na tapawa thermal, ebe ọ bụ ihe na-eme ka ọ bụrụ ihe na-eme ka ọ ghara ikpo ọkụ. Ya mere, ha ga-enwe ezigbo ikike iduzi okpomọkụ. A na-eji nkeji dị ka watt kwa mita-Kelvin tụọ ihe a. Dabere n'ụdị pasta ma ọ bụ ika, ihe omume a nwere ike ịdị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, ndị nke ọla kọpa, ọlaọcha, diamond ma ọ bụ aluminum nwere ezigbo ihe onwunwe na nke a, ndị ọzọ dị ka zinc oxide, aluminum nitride, wdg, ọ bụghị nke ukwuu.
Igwe ọkụ eletrik: Ọ metụtara otu n'ime nsogbu nke tapawa ọkụ nwere ike ịkpata ma ọ bụrụ na ọ na-eduzi ọkụ eletrik nke ọma. N'ozuzu, ndị na-emepụta pasta na-egosipụtakarị nguzogide eletrik nke ngwaahịa ha na-enye. Nke dị elu (ohms kwa centimita), nke ka mma insulator ọ ga-adị, ya mere ọ nwere ike ịka mma. Ọ bụrụ na tapawa nwere obere nguzogide ma na-eme nke ọma mgbe ahụ ọ nwere ike ibute nsogbu sekit dị mkpụmkpụ ma ọ bụrụ na ọ bata na kọntaktị ụfọdụ egwu ma ọ bụ ntụtụ.
Ọnụọgụ mgbasa nke thermic: bụ nkeji ọzọ ịṅa ntị. N'okwu a, ị ga-achọ mado nke ọnụ ọgụgụ ya bụ nke kachasị ala, ya bụ, nke mere na ọ na-agbasawanye dị ka o kwere mee na okpomọkụ. Ma ọ bụghị ya, ọ nwere ike ịkpata nsogbu esemokwu n'etiti components.
Therdị nke griiz na-ekpo ọkụ
Enwere ọtụtụ ụdị tapawa thermal na ahịa, ọ dịkwa mkpa ịmata ọdịiche dị n'etiti ngwọta niile dịnụ iji mara nke ị ga-ahọrọ na nke ọ bụla, ebe ọ bụ na ha niile nwere nke ha. uru na ọghọm:
Igwe ọkụ ọkụ: Ọ bụ nrapado ma ọ bụ mpe mpe akwa nke na-arụ ọrụ dị ka interface conductive okpomọkụ na nzube ya bụ otu ihe ahụ dị ka pasta thermal, ma enwere ike iji ya mee ihe n'ụzọ dị mfe, ma ọ dịghị agụnye ịchịkwa ọnụọgụgụ, na-eme ka ọ gbasaa n'otu n'otu, wdg. ebe ọ bụ na ọ na-arapara naanị n'elu akụkụ nke a ga-ekpochapụ ma ọ bụ na heatsink. A na-ere ha iche iche, n'agbanyeghị na ha na-abịakarị etinyere ya na ụfọdụ sistemụ refrigeration iji kwado mgbakọ. A na-ejikarị silicone ma ọ bụ paraffin mee ihe ndị a na ihe ndị na-eme ihe siri ike. N'ebe okpomọkụ dị n'ime ụlọ, ha na-apụta nke siri ike, ma mgbe ha na-arụ ọrụ, ha na-aghọwanye mmiri.
Kwadochi kpo oku: bụ ihe mmiri viscous nke a na-ere na mkpọ nwere brush ngwa, tubes ma ọ bụ sirinji maka ngwa dị mfe. N'ime pasta a, ị nwere ike ịhụ ụdị ndị a:
Nke igwe: ha na-eji ihe ndị dara (zinc, ọla kọpa, aluminum, silver, gold ...) maka njuputa, na ha na-enwekarị agba ntụ. Ha na-ewu ewu nke ukwuu, ha adịghịkwa oke ọnụ. Ha na-akpa àgwà nke ọma n'ihe gbasara thermal conductivity, na-enwe ike ibelata okpomọkụ ruo 6ºC n'ọnọdụ ụfọdụ. Otú ọ dị, ha nwere nsogbu, ọ bụkwa eletrik ha. Site na irighiri ihe igwe, ọ nwere ike ịfegharị n'etiti kọntaktị ma ọ bụrụ na ọ nwere ntapu.
Seramiiki: ihe ndochi ahụ bụ seramiiki (zinc oxide, silicon dioxide, aluminum oxide, ...), na-enye ìhè isi awọ ma ọ bụ agba ọcha. Isi ihe siri ike nke silicones ndị a na-ekpo ọkụ bụ na ha dị ọnụ ala ma nwee obere eletriki eletrik, ya mere, ha dị nchebe ma ọ bụrụ na ọnyà. Otú ọ dị, conductivity ha thermal ka njọ, ya mere, ha ga-enyere aka belata okpomọkụ 1 ruo 3ºC ma e jiri ya tụnyere interface na-adịghị eji ya.
Carbon: ha dị oke ọnụ ma dị ọhụrụ, ma ha na-enye nsonaazụ ka mma. A na-ezubere ha maka sistemu chọrọ mgbasa ọkụ ka ukwuu, dị ka ibe kpuchiri ekpuchi, arụmọrụ dị elu ma ọ bụ akụrụngwa dị elu, wdg. Ha na-adabere na ihe ndị dị ka ájá diamond, graphene oxide, wdg. N'okwu a, ihe onwunwe ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke zuru oke, ebe ọ bụ na n'otu aka ha nwere ezigbo okpomọkụ dị mma dị ka nke ígwè, na nke ọzọ ha nwere obere eletrik eletrik dị ka nke ceramics.
Igwe mmiri mmiri: Ha abụghị nke a na-ahụkarị, mana ụfọdụ ndị na-emepụta ma ọ bụ ndị na-anụ ọkụ n'obi na-ejikarị eme ihe maka heatsink blocks nke nhazi nhazi wdg. Ọ bụ ezie na ha nwere ihe nkwụsị nke ọma, ọbụna dịtụ mma karịa ndị dabeere na ígwè, ụdị ọzọ a na-adịkarị ọnụ ma nwee ike imeghachi omume na heatsinks aluminum, ebe ọ bụ na ha na-eji ọla dị ka indium ma ọ bụ gallium.
Ngwakọ: E nwekwara ụfọdụ ngwakọ thermal pastes, ya bụ, ha na-agwakọta ihe dị iche iche na-ejuputa dị ka isi iji meziwanye ihe ndị ahụ.
Kedu ngwaahịa ị ga-azụta?
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta ngwaahịa mado ọkụ, ebe a bụ ụfọdụ n'ime ụdị kacha mma na nhọrọ nke ị na-ahụ n'ahịa:
Pads ma ọ bụ paịlị thermal: ADWITS
Ngwakọ thermal mado: Noctua NT-H1
Ceramic: Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla.
Nke metal: Silver Artic 5
Carbon dabere: Cooler Master MasterGel Onye kere
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ihe eletrọniki » Thermal mado: kedu ihe ọ bụ, ụdị, otu esi eji ya ...
Raspberry Pi Zero 2W: nke kachasị ọhụrụ sitere na Raspberry Pi